Nkwado Aka Mmetụta maka Logic Pro X ga-adị na mmalite nke afọ | Esi m mac
Nkwado Aka na-akwado Logic Pro X ga-adị na mbido afọ a
Nke nta nke nta anyị maara ngwa ndị a ga-emegharị iji nweta uru niile Touch Bar na-enye anyị. FCP, Terminal, GarageBand, Maps, iTunes, kalenda, Djay Pro ma ọ bụ Photoshop, yana ngwa ndị dị na ngwugwu iWork
Ma mgbe ha mụtara na Logic Pro X ga-emegharị na Touch Bar, ọtụtụ ndị na-ede egwú na-enwe chi. Akụkọ na-abịakwute anyị site na isi nso ụlọ ọrụ ahụ: Apple na-arụ ọrụ imeghari Logic Pro X iji were uru nke atụmatụ ya niile.
A na-atụ anya na ntọala nke ntinye ahụ, bụ ihe ewepụtara na isi okwu ikpeazụ gbasara ngwa ahụ Garageband. Anyị ga-enwe ụzọ mkpirisi iji rụọ ọrụ y ngwa a kapịrị ọnụ nke ụfọdụ mmetụta ma ọ bụ nkwụnye n'elu egwu a na-edezi ugbu a. N'okwu nke Apple n'onwe ya, na isi okwu ikpeazụ ọ na-ekwu maka ikike "Metụ Ogwe aka iji mezie ụda nke ngwa na mmetụta ma ọ bụ gbanwee olu egwu".
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị chere na anyị ahụla naanị ọnụ mmiri iceberg n'ihe gbasara arụmọrụ Bar Bar, dịka omenala dị iche iche nke ahụ ga - enyere anyị aka ịrụ, ikekwe nke kachasị mkpa. Ọ ga - enyere anyị aka ịhọrọ ụdị ihe eji eme ihe ugboro ugboro, ka ị bụrụ n'ụzọ dị ezigbo mkpa arụpụta ihe.
N'aka nke ọzọ, na ebumnuche ịmatakwu nke ọma ihe ndị ga-adị, anyị nwere ike nyochaa nyocha nke ngwa ahụ Djay na akpatre isi okwu ma mara mmekorita ya na Aka Ogwe. Can nwere ike ịlele vidiyo dị n'okpuru.
Ngwa a natara mmelite buru ibu n'oge ọkọchị gara aga, mana gwa gị nke ahụ Apple na-eme ka ngwa ahụ dị ọhụrụ site na nkezi nke atụmatụ ọhụrụ 2-3 kwa afọ. Enwere ike zụta ngwa ahụ na ọnụahịa nke € 199,99 na applọ Ahịa ngwa Mac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Nkwado Aka na-akwado Logic Pro X ga-adị na mbido afọ a
New MacBook Pros nwere ike ịbụ dakọtara na ụfọdụ Thunderbolt 3 ngwaọrụ
Ebumnuche mbụ nke Keyboard Ime Anwansi na Ogwe Aka